ဒေါင်းလုပ် FORMAT ကိုစက်ရုံ - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Format စက်ရုံ 4.3.0.0
Skype ကိုဆော့ဖျဝဲ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာတစျခုကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Skype ကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြားက၎င်း၏လူကြိုက်များကြွေးတင်နေသည်ဟုကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိဒီအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒီ program တစ်ခုအစုလိုက်အပြုံလိုက် function ကို access ကိုဗီဒီယိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာမဟုတ်ဘဲအားလုံးအသုံးပြုသူများကိုဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိပေမယ့်, videozvnoki အောင်ဘယ်လိုသိကြ၏။ ဤပြဿနာကိုကြည့်ကြရအောင်။
သငျသညျ Skype ကိုကနေတဆင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ခေါ်မှီ, သင်ကအစောပိုင်းကပြုသောအမှုမခံခဲ့ရပါလျှင်, ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ချိတ်ဆက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကို set up ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နားကြပ်သို့မဟုတ်ပီ - သငျအသံ output ကို devices များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် configure ဖို့လိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာ။
နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, အဘယ်သူမျှမဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုချိတ်ဆက် webcam မပါဘဲသဘောပေါက်မရနိုင်ပါ။ အများဆုံးရုပ်ပုံအရည်အသွေး, ထုတ်လွှင့်တင်ပါတယ်သေချာစေရန်လည်း Skype ကိုအစီအစဉ်တွင်ကင်မရာ settings တွေကို configure လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Skype ကို 8 ရက်နေ့ကဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အထက်
Skype ကို 8 ကနေတဆင့်ဖုန်းခေါ်စေနိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတက် setting ပြီးနောက်အောက်ပါကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ညာဘက် pane ထဲကထိပ်မှာထို့နောက်ဗီဒီယိုကင်မရာအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် signal ကိုသင့်ရဲ့တင်ပါတယ်တတ်၏။ ဒါကြောင့် program ကိုအိုင်ကွန်တီဗွီကင်မရာမှာနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးတာနဲ့သင်ကကိုယ်တော်နှင့်အတူစကားပြောစတင်နိုင်ပါသည်။
စကားဝိုင်းမှာအဆုံးသတ်စေရန်, သင်တစ်ဦးနှိမ့်ချလျှော့ချဖုန်းနှင့်အတူ icon ကို click ပါဖို့လိုပါတယ်။
Skype ကိုအပေါ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 7
အဆိုပါအစီအစဉ်၏ Skype ကို7နဲ့အစောပိုင်း version နဲ့ဖုန်းခေါ်အထက်ပါ-ဖော်ပြထား algorithm ကိုကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။
လူအပေါင်းတို့သည်ကိရိယာများကို set up ဖြစ်ပါတယ်တပြိုင်နက်, Skype ကိုအစီအစဉ်တွင်သင့်အကောင့်ကိုသွားပါ။ လျှောက်လွှာ window ၏ဘယ်ဖက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးသောအဆက်အသွယ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့တပ်မက်လိုချင်သောတင်ပါတယ်ရှာပါ။ ၎င်း၏အမည်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, right-click, နှင့် Context Menu က မှစ. , select လုပ်ပါ "ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု".
ခေါ်ရန်ရွေးချယ်ထားစာရင်းပေးသွင်းထားသူမှကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာလက်ခံရပေမည်။ အဆိုပါစာရင်းပေးသွင်းထားသူခေါ်ဆိုမှုပယ်ချ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလက်ခံမည်မဟုတ်ပါက video call တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အခြားပါတီခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံထားပြီးလျှင်သင်သူ့ကိုအတူစကားလက်ဆုံစတင်နိုင်ပါသည်။ သူလည်းကင်မရာကိုချိတ်ဆက်လိုလျှင်, သင်ရုံတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအပေါ်သာမဆောင်ရွက်နိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းဖန်သားပြင်ကနေစောငျ့ရှောကျဖို့။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအဆုံးသတ်စေရန်, ရုံစင်တာတစ်ခု inverted အဖြူရောင်ဟန်းဆက်နှင့်အတူအနီရောင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Android နှင့် iOS နှင့်အတူမိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Skype ကိုလျှောက်လွှာတစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု updated version ကိုများအတွက်အခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, က video call တစ်ခုထွက်ဆောင်သွားစေတဲ့ Desktop ပေါ်မှာအဖြစ်သိသိသာသာတူညီသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာကို run နှင့်သင်ကဗီဒီယိုမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုချင်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအသုံးပြုသူတည်နေရာ။ သငျသညျမကြာသေးမီက chatted ကြလျှင်, မိမိအမည် tab မှာနေရာချပါလိမ့်မည် "ချတ်များ"ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စာရင်းထဲမှာရှာ "ဆက်သွယ်ရန်" Skype ကို (အောက်ပိုင်းအလွှာထဲက tab ကို) ။
အသုံးပြုသူဖို့ချက်တင် window ကိုဖွင့်လှစ်, သေချာပါက network ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်လုပ်, ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ရန်ဗီဒီယိုကင်မရာအိုင်ကွန်၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ပေါ် tapnite ။
ယခုမှသာအဖြေကိုများအတွက်ခေါ်ဆိုခစောင့်ပြောနေတာကိုစတင်ရန်နေဆဲဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, သင်ဖန်တီးနှင့်ချက်တင် screenshots များပေးပို့အဖြစ်အကြိုက်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်အစပီကာနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းကို enable သို့မဟုတ် disable, မိုဘိုင်းထုတ်ကုန် (ရှေ့နှင့်နောက်) ၏ကင်မရာများအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သီးခြားဆောင်းပါးအစီရင်ခံအဖြစ်, ဖိုင်တွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအမျိုးမျိုးမှအသုံးပြုသူပေးပို့ခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
Read more: Skype ကိုအပေါ်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုပေးပို့ဖို့ကိုဘယ်လို
(ကဝှက်ထားလျက်ရှိ၏လျှင်) မီနူးဖော်ပြရန်ဆိုရာဌာန၌မျက်နှာပြင်ဖြတ်ပြီးစကားပြောဆိုမှုပြီးဆုံးသောအခါ tapnite, ထို့နောက်မှပြန်လည်စတင် button ကို click - အနီရောင်စက်ဝိုင်း inverted ပြွန်။
ခေါ်ဆိုမှုကြာချိန်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များချက်တင်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဗီဒီယို၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ဖို့ပူဇော်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တောင်းဆိုချက်လုံခြုံစွာလျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Skype ကိုအတွက်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုက
ဒါကြောင့်ကဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့် Skype ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းအသုံးပြုသူဖုန်းဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မည်မျှလွယ်ကူသည်။ ဒီအတှကျသာအခွအေနေသင့်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ်အတွက်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့အတွက် Skype ကိုအစီအစဉ်ဖုန်းခေါ်ပါစေ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အားလုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအလိုလိုသိကြသည်, သို့သော်အချို့သာမန်နေဆဲထွေး, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုအောင်။
ဗီဒီယို Watch: Reparar o restaurar PlayStation4usando las opciones de recuperación. Modo Seguro de PS4 (နိုဝင်ဘာလ 2019).